ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလဲ? အံ့သြစရာကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်နိဂုံးချုပ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန် Icelandic မီးတောင်ပြာဆန်းစစ်ခဲ့သည်, ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးနှင့်အိုင်အနည်၏သိုက်အတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၅၀၀ မှ ၅၅၀၀ အတွင်းမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကာလကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင်အပူချိန်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကြောင့်ရေခဲမြစ်များသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ ဤအချက်သည်မီးတောင်များကိုစိတ်ချစေနိုင်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာကြီးသည်တဖန်နွေးလာသောအခါမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများပြားလာသည်။
»ရေခဲမြစ်များပြန်လည်ကျဆင်းသွားပါကကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖိအားလျော့နည်းသွားသည်။ လေ့လာမှု၏တွဲဖက်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်လီဒါတက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခအီဗန်စဗေးဗဗ်ကရှင်းပြသည်မှာ၎င်းသည်ဝတ်လုံများ၏အရည်ပျော်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးအပေါ်ယံလွှာကိုထောက်ပံ့နိုင်သောကျောက်စီးဆင်းမှုနှင့်ပမာဏကိုပါထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ မျက်နှာပြင်ဖိအားအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည် ရေခဲဖုံးလွှမ်း။ ရာစုအကုန်တွင်ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန် ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မြင့်တက်လာခြင်းမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အစီအမံကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခု
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံကိုဖတ်ရန်၊ သင်လုပ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ပူနွေးသောကမ္ဘာတွင်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများရှိနိုင်သည်
၂၀၁၇ နို ၀ င်ဘာသည်စံချိန်တွင်ပဉ္စမအနွေးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်